သွားတိုက်ပေမယ့် ခံတွင်းနံ့မကောင်းဖြစ်နေတဲ့အခါ | OnDoctor
By Wai Yan Lin	 On May 23, 2018 Last updated Jun 27, 2019
တစ်နေ့ကို ၂ ကြိမ် သွားသေချာတိုက်နေပေမယ့် ခံတွင်းနံ့မကောင်းဘူးဖြစ်နေပါတယ် ? ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်း ယုံကြည်မှုမရှိတော့ပါဘူး။ ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲ ?
ခံတွင်းနံ့ ကောင်းခြင်း၊ မကောင်းခြင်းတွေက အချက်အလက်ပေါင်းများစွာ အပေါ်မှာမူတည်နေပါတယ်ဗျ။
ကျန်းမာရေးအခြေအနေ၊ စားတဲ့အစားအသောက်၊ ခံတွင်းကို ဂရုစိုက်မှု၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ ပုံမှန်သောက်သုံးနေတဲ့ဆေးဝါး စတာတွေကြောင့် ခံတွင်းနံ့ကပုံမှန်မဟုတ်ပဲ ဆိုးနေတတ်ပါတယ်။
အဓိကဖြစ်ရလေ့ရှိတဲ့အကြောင်းက ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေးလုပ်တာအားနည်း (သွားတိုက်တာနည်းစနစ်မကျ) လို့ပါ။
မကောင်းတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေက သွားကြိုသွားကြား၊ လျှာမျက်နှာပြင်ပေါ်က အရသာခံအဖုလေးတွေကြား၊ သွားဖုံးတွေပေါ်မှာ ရှင်သန်ပေါက်ဖွားနှုန်း အရမ်းများပြားလာရင် ခံတွင်းနံ့ကဆိုးလာမှာပါပဲ။ ဒီဘက်တီးရီးယားတွေက သွားပိုးစားခြင်း၊ သွားဖုံးရောဂါတွေနဲ့လည်း ဆက်စပ်လျက်ရှိပါတယ်။
သွားတိုက်တာ နည်းစနစ်မမှန်ခြင်း၊ သွားကြားပွတ်ကြိုး (Dental Floss) အသုံးမပြုခြင်း၊ လျှာကို ပုံမှန်သန့်ရှင်းရေး မလုပ်ပေးခြင်း စတာတွေက ခံတွင်းနံ့မကောင်းခြင်းကို ဖြစ်လာစေပါတယ်။
အစားအသောက်ကြောင့်လည်း ခံတွင်းနံ့က ဆိုးလေ့ရှိပေမယ့် ခဏတာမျှပါပဲ။ ဆေးလိပ်သောက်၊ ကွမ်းစားတာကတော့ ခံတွင်းကို ဆိုးဆိုးရွားရွားထိခိုက်ပါတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်၊ ကွမ်းစားခြင်းကြောင့် ခံတွင်းနံ့မကောင်းတဲ့အပြင် သွားတွေမှာအစွန်းထင်းတွေဖြစ် ၊ သွားဖုံးတွေညစ်ပတ်ပြီး လျှာရဲ့အရသာခံနိုင်စွမ်းပါ လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ် ။
သွားပိုးစားခြင်းနဲ့ သွားဖုံးရောဂါတွေအပြင် အခြားကိုယ်တွင်းရောဂါတွေကြောင့်လည်း ခံတွင်းနံ့ကဆိုးလေ့ရှိပါတယ်။ တံတွေးထွက်နည်းခြင်း(Dry mouth)၊ အစာအိမ်နဲ့ အူလမ်းကြောင်းမကျန်းမာခြင်း၊ ဆီးချို၊ အသည်းနဲ့ ကျောက်ကပ်မကောင်းခြင်း၊ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြႆနာရှိခြင်း၊ ဖျားနာခြင်းတွေကြောင့်လည်း ခံတွင်းနံ့ကမကောင်းနိုင်ပါဘူး။
ရေရှည်သောက်သုံးရလေ့ရှိတဲ့ nitrate ပါတဲ့ဆေးဝါး၊ ကင်ဆာအတွက် ဆေးသွင်းနေရသူတွေမှာလည်း ခံတွင်းနံ့ကောင်းလေ့မရှိပါဘူး ။
ခံတွင်းနံ့ ကောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ စနစ်တကျသွားတိုက်တတ်ဖို့လိုတဲ့အပြင် သွားကြိုသွားကြားတွေသန့်ရှင်းဖို့ dental floss သုံးပေးခြင်း၊ လျှာညစ်ပတ်နေခြင်းမရှိစေရန် tongue cleaner သုံးပေးဖို့လိုပါတယ်။
သွားဆရာဝန်နဲ့ ၆ လ ၁ ကြိမ်ပြသပြီး သွားနဲ့ခံတွင်းကို စစ်ဆေးပေးပြီး သွားပိုးစားတာ၊ သွားဖုံးရောဂါတွေကို ကုသပေးရပါမယ်။ ဆေးလိပ်သောက်၊ ကွမ်းစားစတဲ့ ဆိုးရွားတဲ့အလေ့အကျင့်တွေကို ရှောင်ကျဉ်ရမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရေများများသောက်ပေးဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။